SIDA LOO KEYDIYO DABACASAHA XILLIGA QABOOBAHA EE GURIGA, SI AANAY U QALAJIN, MEESHII LA SAMAYN KARO IYO SIDA SI HABBOON LOO QODO: HABABKA UGU FIICAN EE LAGU BADBAADIN KARO DALAGGA ILAA GUGA - KHUDRADDA
Xilliga qaboobaha, waxaad dooneysaa inaad naftaada ku nasto khudaar cusub oo dhadhan fiican leh. Karootada macaan oo casri ah waxaa jecel dadka waaweyn iyo carruurta.
Khudradda cagaaran ee dabiiciga ah ayaa hodan ku ah fiitamiinada iyo macdanta, iyo xilliga jiilaalka, marka jirkeenu ka maqan nafaqooyinka, cunidda karootada cusub ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale caafimaad leh. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo keydiyo karootada ee maqaalkeenna.
Noocyada halbeegga iyo qaabdhismeedka dabacasaha ayaa loo isticmaali karaa kaydinta, iyo inkasta oo khudraddan aan la mid ahayn, waxay u baahan tahay in la waafajiyo shuruudaha qaarkood.
Si karootada si fiican loo hayo, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo waqtiga beereedka marka beerto, iyo beergooyinku waa in si joogto ah loo baaraa calaamadaha waxyeellada ama dhaawaca cudurada fungal.
Si aad u taariikhda, keentay noocyo badan iyo noocyo of dabacasaha, oo leh noocyo kala duwan ee shelf. Cuntada la cuno ayaa loo yaqaan "Miiska karootada", oo sidoo kale leh noocyada u gaarka ah:
MUHIIM! Hase yeeshee, dabacasaha oo dhan kuma habboona kaydinta muddada dheer.
Sida iska cad si fiican loo ilaaliyo ilaa noocyada guga ee karootada si gaar ah loogu talagalay tan:
Bangor - Biyo weyn, casiir leh, dhexdhexaad ah macaan ee dabacasaha. Lagu kaydiyaa ilaa guga, iyada oo aan lumin macluumaadka dhadhanka;
Laguna - gardarrada u adkaysata cudurada, taas oo aan ka cabsanin dhaxan. Waxay leedahay dhadhan wacan iyo bandhig fiican.
"Vitamin" - kala duwanaanshuhu waa mid u adkaysta qabowga iyada oo gaar ahaan loogu talagalay kaydinta dheer. Nooc noocaas ah ayaa ah kan ugu macquulsan marka loo eego inta kale;
"Samson" - daryeel aan qabyo ahayn, dhadhan fiican, oo ku habboon gobollada leh jawi kasta;
"Shantane" - noocyada kala duwan ee aan qabyo ahayn ee ciidda, adkaysi u dillaac, leedahay dhadhan macaan iyo cufnaanta.
Flaccore - khudradda cagaaran ee cagaaran, oo u adkaysata cudurada;
"Boqoradda guga" - noocyo kala duwan oo dheer, dildilaaca marka biyaha la waraabiyo, oo aan ujoogsanayn bolting;
"Carlena" - unpretantious marka koraya, dhalidda sare, loogu talagalay kaydinta muddo dheer.
Muddada kaydinta siyaabo kala duwan
Sidee u fiican iyo ka dheer si aad uhesho karootada ilaa guga, iyo sida loo sameeyo guriga, si aysan u qalalan jiilaalka? Karootada way adag tahay in la kaydiyo, laakiin haddii aad dooratid habka saxda ah - waxaad ku kaydin kartaa khudradda muddo dheer.
Laga bilaabo 2 ilaa 3 bilood - bacaha balaastigga ah.
Laga bilaabo 4 ilaa 5 bilood - kudhuban.
Laga bilaabo 5 ilaa 7 bilood - sanduuqyada.
Laga bilaabo 6 ilaa 8 bilood - ciidda.
1 sano - dhoobo.
1 sano - cirbadaha.
Si loo xaqiijiyo shuruudaha kaydinta ugu wanaagsan ee karootada, marka hore waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u diyaariso this, iyo kaydinta saxda ah ee dabacasaha bilaabmaa ay goosashada. Waxay ku xiran tahay arrintaan inta badan muddada dheer ee dalagga xididada loo kaydin karo, ilaalin lahaa sifooyinka faa'iidada leh.
Sidee loo qodayaa karootada loogu talagalay kaydinta? Xaaladda ugu muhiimsan ee ilaalinta wanaagsan ee dalagyada dalaggu waa nadiifinta taariikh dambe (dhammaadka Sebtembar - qiyaastii bilowgii Oktoobar). Laakiin laguma talinayo inaad ka walaacdo nadiifinta, roobabka daba dheeraadka ah ee karootiga ah ayaa la jilciya qoyaan, crack iyo luminta tayada dhadhanka.
Waxaad ku qodiri kartaa khudradda leh fargeeto beerta, si aanay u dhaawacin dalagga dalagga, iyo waa suurad wacan in la sameeyo tan oo ah cimilada qalalan. Ka dib markii la qodayo, ka tag oo u qalaji hooska. Dabadeed, karootada waxay ku faaftaa lakab khafiif ah oo lagu keydiyo heerkulkoodu hooseeyo 1-2 toddobaad, inta lagu jiro waqtiga nooca "doorashada dabiiciga ah".
Dhoobada Dug waa in la xalliyaa. Dooro khudaarta cagaaran ee ugu quruxda badan. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, nadiifi dhulka oo jarjar dushooda.
Karootada - khudaarta picky, oo ubaahan xaalado gaar ah. Si aad u keydiso waxaad u baahan tahay meel nadiif ah, jeermis oo leh heerkulka ku habboon.
TALO! Si aad u doorato meel aad u baahan tahay in la xasuusto in xididada ay si fiican ugu kaydsan yihiin qol mugdi ah, qabow oo leh qoyaan ugu yaraan 90%.
Badanaa isticmaal xarumo asaasiga ah ama maqaasiinka. Haddii aysan jirin meelo sidaas oo kale ah waa inaad kaydisaa khudradda aan lahayn maqaasiinka, guri dabaq ah waxaa fiican inaad isticmaasho qol kaydinta, ama karootada qaybta ugu qabow ee aqalkaTusaale ahaan, meel u dhow albaabka balkoonka, balakoonka ama qaboojiyaha.
Ha dhigin karootada meel u dhow batteriyada iyo kuleyliyaha. Heerkulku wuxuu si weyn u saameeyaa ammaanka dalagyada xididada.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa barafeeyaha haddii aad u baahato inaad barafto.
In kastoo jidka iyo shuruudaha dabiiciga ah la keydin doono, Waa inaad raacdaa xeerarka qaarkood ee kaydinta:
karootada waa in la nadiifiyaa wakhtiga, nadiifinta, la xushay, la qalajiyey, aan waxyeello lahayn, iyada oo aan lahayn qabow;
meel loo diyaariyay ayaa looga baahan yahay dhammaan shuruudaha ugu fiican ee kaydinta khudaarta;
dooro weel ku habboon;
Ha ilaawin waqtiga kaydka ee xididka.
Waxaa jira hababka kaydka oo kala duwan oo aad kala dooran karto ugu haboon:
Kaydinta karootada ee ciidda.
Si arrintan loo sameeyo, isticmaal sanduuq cusub oo qoyan (markaad ku urursan tahay gacanta, buro ciid ah waa in aan la jarin). Tani waa mid wax ku ool ah in ciidda ka ilaalisaa dabacasaha ka qalajinta iyo ka hortagaa cuduro kala duwan.
Caawin! Qeybta hoose ee sanduuqa ku shubtay ciid 3-5 cm qaro weyn, ka dibna jiifay karootada at masaafada gaaban ee kasta oo kale, ka dib markii taas oo lakabka xiga ee ku xiga, iyo sidaas u bedelaad dheeraad ah.
Daawo fiidiyowga ku saabsan kaydinta karootada ee ciidda:
Uma baahnid inaad isticmaasho balka balka ah. Thanks to walxaha bakteeriyada ah ee cirbadaha ku jira, xididdada ayaa laga ilaalin doonaa fungi iyo bakteeriyada waxyeellada leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la jiifiyo sida cammirka.
Daawo fiidiyowga ku saabsan keydinta dabacasaha dhadhanka dhaadheer:
Waxaa lagama maarmaan ah in dhoobo dhoobo biyo ah si joogta ah ee labeen dhanaan. Kadibna, ku dhaji caag balaastig ah oo ku yaal hoose ee sanduuqa, ka dhig lakabka dabacasaha iyo ku shub dhoobada.
Marka xalka uu qalalan - waxaad ku dari kartaa lakabka kale ee dabacasaha, dhoobo dhoobada, iwm. Waxaa jira hab kale oo lagu keydiyo karootada dhoobada. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dalagga geedka ugu horreeya ee xakamaynta toon, ka dibna dhoobada; Qalloo oo sanduuqa ku rid.
Polyethylene waxay haysaa qoyaan, taas oo lagama maarmaan u ah dabacasaha. Waxaa ugu fiican in la isticmaalo bacaha oo leh awood 5 kg iyo ka kor. Bacaha waxay u baahan yihiin in laga tago furan, sidaa daraadeed dabacasaha ma qudhmi.
In kabo qajaar ah.
Saliidaha muhiimka ah ee miisaanka sunta leh ee ku jira ma ogolaanayaan dalagyada xididka si loo yiraahdo. Shuruucda dhigista waa isku mid sida cammirka ama cirbadaha.
In 3-litir 3 litir.
Waxaad karootada ku ridi kartaa weel haddii aad leedahay wax yar. Waxaad ku kaydin kartaa qaboojiyaha, balakoonka ama meel u dhow albaabka barkada, waxay ku xiran tahay cimilada.
Karootada waxay u baahan yihiin inay horay u diyaariyaan, nadiifiyaan, oo ay qalalaan. Ka dib markaa, ku rid weelasha (weelka balaastigga ah, bacaha balaastikada ah, bacaha nadiifka ah, iwm.) Kuna rid barafeeyaha. Karootada barafaysan waxaa lagu keydin karaa wax ka badan saddex bilood.
Sidoo kale, jawaannada caadiga ah iyo cagaarka ayaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo dabacasaha.
Heerkulka kaydinta dabacasaha ayaa ah door muhiim ah. Haddii heerkulku aad u hooseeyo, xididdadu waxay heli karaan barafoob, haddii ay aad u sarayso, qoyaanku wuu ka sii daadanayaa karooto ka dibna ugu dhakhsaha badan wuu engegi doonaa. Xulashada ugu fiican waa qol quruxsan oo qabow ah (maqaasiinka, qolka hoose), oo leh heerkul ah -1 ilaa 5 digrii, ka dibna karootiga waxaa la keydin karaa waqti dheer.
Maxaa dhacaya haddii aysan jirin maqaasiinka?
Sidee kale ayaad u kaydin kartaa? Haddii aysan jirin wax asaasiga ah, Waxaad karootiga ku kaydi kartaa guriga qaboojiyaha, ku duub bac caag ahama sanduuqyada qoyan ee qoyan ee barkada kulul, halkaasoo heerkulku noqon doono qiyaastii 2+.
Sida loo sameeyo guriga?
Sidee loo badbaadiyaa dufac ballaadhan ee ugu fiican? Haddii aad rabto inaad siiso karootada cusub xilliga qaboobaha, laakiin waxaa jira guryo qashinka oo kaliya ah, waxaad isticmaali kartaa xulashooyinka soo socda:
Habka ugu wanaagsan ee lagu keydiyo karootada qaboojiyaha, sanduuqyada khudradda leh, oo ay ugu wacan tahay xaaladaha heerkulka ugu habboon. Meelo aan ka badnayn 6 karootada bacda, ku rid bacda inta ugu badan ee suurtogalka ah, ka dibna ku adkee. Dalagga xididada waxaa lagu keydin doonaa qaboojiyaha, laakiin waxaa laga yaabaa inuu kareeyo haddii la dhigo meel u dhow khudaarta kale.
Si loo keydiyo karootada, dhalooyinka waa in la diyaariyaa: biyo raaci (oo dooro biyo karkaraya) oo qalalan. Ka dibna ku rid dabacasta iyaga oo ku jira lakab aan cufan lahayn, sidaas darteed waxaa jira meel yar oo u dhexeysa khudaarta. Ka tag qolka madow, adoo xiraya daboolka.
Ka hor inta aadan ku ridin karootada balakoonka, waa inaad ka ilaalisaa wasakh, boodh, iyo iftiinka qoraxda. Boodhku wuxuu noqon karaa bakteeriyo waxyeelo leh oo si weyn u dhaawici kara xididada.
Digniin! Dhoobada karootada balakoonka waa suurtagal oo kaliya ka hor bilawga ah ee dhaxan ugu horeysay.
Waa lagama-maarmaan in laysku gooyo khudaarta hal lakab si aysan u taaban, ka dibna ku rusheeya diirka basasha.
Haddii karootada la diiriyo
Haddii ay jirto rabitaan ah in lagu hayo mashiinka la dhaqay, karootada diirran, waa in la xusuustaa in la keydin doono ugu badnaan 2 asbuuc. Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan doontaa inaad ku riddo bac caag ah oo aad ka tagtid qaboojiyaha.
Waxaad isticmaali kartaa doorasho kale, karootada la dhaqay iyo karootada diirran ee qaboojiyaha. Halkaas waxaa lagu keydsan karaa sanad, laakiin waxay lumin doontaa midabkeeda iyo dhadhankiisa.
Maxaa la sameeyaa xididada yaryar?
Haddii, marka diyaarinta dabacasaha loogu talagalay, xididdada yaryar iyo kuwa aan aadka u quruxda badan ayaa laga tegayaa, waa inaan la tuurin, sababtoo ah dhammaan khudradda waa la isticmaali karaa. Karootada yaryar waxay ku habboon yihiin caanaha guriga, taas oo sidoo kale ah hab weyn oo lagu keydiyo karootada xilliga qaboobaha. Si loo keydiyo karootada yar yar xilliga qaboobaha, waa la qalajin karaa.
Waxaa jira dhowr shuruuc oo gaar ah oo ay tahay in la raaco marka kaydinta khudradda ee maqaasiinka guriga:
Diyaari qolka. Dheecaan oo nadiifi meesha si ay u qaboojiso, qoyan oo nadiif ah.
Dooro weel iyo buuxiyo, kaas oo lagu keydin karootada.
Iska ilaali isbedelka heerkulka.
Sii difaac ugu badnaan Maqaasi ka soo cayayaanka, bakteeriyada iyo caaryada.
Lay soo xulay, diyaarisay kaydinta karootada.
Ha ku ridin noocyo kale oo khudaar ah oo ku xiga dabacasaha.
On sida si habboon u kaydisaa dabacasaha maqaasiinka diiran, dhulka iyo sariiraha, akhri qalabka shakhsiga ee our site.
Khaladaadka caadiga ah:
Diyaargarow qaldan ee xididka. Haddii karootiga aan si buuxda loo qalajin ama uu jiro khudaar jirran, sicirka waa 100% in dalagga oo dhan la baabi'in doono.
Qol aan nadiif ahayn. Dirtada iyo boodhka waxa ku jira bakteeriya si weyn u dhaawici karootada.
Heerkulka khaldan. Haddii heerkulka qolka uu aad u sarreeyo, karootada ayaa gari kara ama kallana, iyo haddii ay aad u hooseeyso, qaboojiso.
Qoyaanka sare ama qoyan ee qolka. At qoyaan badan, karootada si dhakhso ah u bilaabmaa kallana, at hoose - waxay cilladeysaa.
Si aad u badbaadiso karootada muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhammaan xeerarka. Wax kasta oo jebin waxay keeni kartaa in lumiyo dhammaan dalagga.